African Nhabvu Vatambi Vacheche Nyaya uye Untold Biography Chokwadi
zvoseBelgian Nhabvu VatambiVaCroatia Vanotamba NhabvuDanish Nhabvu VatambiVatambi Venhabvu veDutchVatambi vechiFrench VanotambaVatambi vechiGerman VanotambaVatambi Vanotamba NhabvuVatambi vechiPutukezi VatambiSpanish Vatambi Vatambi
Raphael Guerreiro Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Marcus Thuram Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yacine Adli Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Alessandro Bastoni Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha AFRAN FOOTBALL STORI
7 mazuva dzakakurumbira
By ongororo chibozwa
Wese muAfrica Basketball ane Nhau dzeChikoro Chemwana dzakazadzwa nenguva dzisingakanganwiki dzinonakidza uye kubata. Donzvo redu nderekutaurirai idzi dzeMavambo Life Stores pamwe neAfrica Soccer Players Biography Chokwadi.
Sei Iyo Inotarisana neAfrican Footballers Zvevacheche Nyaya dzeNhoroondo uye Biography?
Mukutendeseka kose, tinoita izvi senzira yekugadzirisa dambudziko raizivikanwa riripo nezve Africa Nhabvu. Munguva pfupi yapfuura, takaona danho rezivo pane yepasi rose-rebhu, iro rine chekuita nekushaikwa kwemashoko akarongeka nezveAfrican Footballers maererano nehupenyu hwavo hwepakutanga.
Mukuda kuvhara iyi gidhi, LifeBogger mugore ra 2016 yakafunga kuisa musheni yekudzokorora nyaya dzeUdiki uye Biography Nhau dzeAfrican Nhabvu.
Yedu Yenhabvu Yenhabvu Yenyika:
Zvese zvinyorwa pamusoro pevatsigiri venhabvu vanobva mukondinendi vari kugadzirirwa kuti vataridze kutenderera kweiyo nyayaline. Yedu yeAfrica zvirimo inokuudza zvinotevera.
Kutanga uye pamberi pezvese, tinotaura nyaya dzehudiki yeavo vatambi vemuAfrica, kutanga nenguva yekuzvarwa kwavo uyezve, zviitiko zveupenyu hwepakutanga.
Tinokuunzira ruzivo nezve nhoroondo yeMhuri uye mavambo eAfrican Footballers. Izvi zvinosanganisirawo ruzivo nezvevabereki vavo (mai naamai).
Isu tinokuudza zviitiko zveHupenyu hwepakutanga izvo zvakatungamira pakuzvarwa kwevashandi veAfternbbball.
Uye zvakare, tinokuudza zvinoitika zveAfrican Footballers zvinosangana navo panguva yavo yekutanga yebasa.
Yedu nzira kuFame Nhau inounza iwe 'Turning Point' muvechidiki basa reAfter Mabhiza.
Iyo Rise to Fame Nyaya inotsanangura iyo Mabudiro Nhau dzeAftera Africa Vatambi.
Isu tinoenda mberi kuti tikugadzirise nehupenyu hwehukama hweanhabvu eAfrica. Mune mamwe mazwi, ruzivo nezvevasikana vavo uye vakadzi.
Inotevera Chokwadi pamusoro peMararamiro eVatambi veAfrica Bhora.
Isu tinokuita zvakare kujairana nenhengo dzemhuri dzeAfrican Footballers pamwe nehukama hwavanadzo nemumwe.
Chikwata chedu chinoenderera mberi chichivhenekera African Footballers Vanowana, yavo yeNet yakakosha uye Mararamiro.
Yekupedzisira asi kwete iyo rondedzero, tinounza kwauri Untold Chokwadi iwe hauna kumbobvira waziva kuvapo nezveAfrica Bhora.
Parizvino, isu takadambura chikamu chedu cheAfrican mune izvi zvinotevera zvidimbu. Zvinosanganisira;
Ghanan Nhabvu Vatambi
Wakaverenga ichi chinyorwa, iwe uchaona kuti LifeBogger inotenda mune zano rekupinza paruzivo munzira yayo yekuburitsa Nyaya dzeUdiki uye Biography Chokwadi yeVanhabvu vemuAfrica. Kwatiri, hazvisi zvekungoona Bhora chete asi kuziva nyaya dziri kumashure kwemazita pitch.
Patinovavarira kururamisa uye kusasarura, nomutsa Taura nesu kana iwe ukatarisa chero nyaya, kukanganisa kana kusiyiwa mune chero chipi zvacho zvinyorwa zvedu pamusoro peVanhabvu vemuAfrica.
Chekupedzisira, ngatiregei iwe Zvinyorwa zveUdiki uye Biography Chokwadi chevatambi veAftera yeNhabvu.
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Kubvumbi 15, 2020
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Kubvumbi 15, 2020 0
Idrissa Gueye Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
Nicolas Pepe Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
Hakim Ziyech Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Chivabvu 22, 2020 0
Serge Aurier Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LifeBogger Editors - Yakagadziridzwa zuva: Ndira 24, 2019 1
123...5Page 1 pamusoro 5